သားအိမျတှငျးထညျ့ပစ်စညျးဖွငျ့ အရေးပျေါသန်ဓတေားခွငျး – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အရေးပျေါသန်ဓတေားဆေးဆို လူအမြားစုသိကွတာက ဆေးလုံးလေးတှပေါ။ဒါပမေယျ့ အရေးပျေါသန်ဓတေားရာမှာ အထိရောကျဆုံးနညျးလမျးကတော့ သားအိမျအတှငျးထညျ့တဲ့ပစ်စညျးဖွဈတဲ့ copper IUDs ပါပဲ။
Copper IUDs ဟာ အကာအကှယျမရှိဘဲလိငျဆကျဆံမှုပွုလုပျပွီး ၅ ရကျအတှငျးထညျ့သှငျးအသုံးပွုမယျဆိုရငျ ကိုယျဝနျမရရှိအောငျ ၉၅ ရာခိုငျနှုနျးကြျော ကာကှယျတားဆီးနိုငျပါတယျ။
အရေးပျေါသ်ဓနေတားဆေး(Emergency pills) နဲ့ ကှာခွားခကျြကတော့ အရေးပျေါသ်ဓနေတားဆေး ဟာ နောကျထပျကိုယျဝနျမရအောငျဆကျလကျကာကှယျဖို့ တခွားနညျးလမျးတှကေိုဆကျသုံးဖို့လိုပွီး Copper IUDs ကတော့ သားအိမျထဲက ပွနျမထုတျမခငျြး ၅ နှဈနီးပါးအထိ သန်ဓတေားနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။
Copper IUDs ဟာ သုကျပိုးနဲ့ သားဥတှဆေုံ့မယျ့လမျးကွောငျးကို ဝငျရောကျဟနျ့တားနှောငျ့ယှကျခွငျးဖွငျ့သန်ဓတေားတာဖွဈပါတယျ။သုကျပိုးနဲ့သားဥမတှဆေုံ့ရငျ သန်ဓအေောငျတာလညျးဖွဈမလာနိုငျတော့တဲ့အတှကျ ဒါတှအေသုံးပွု ခွငျးကို ကိုယျဝနျဖကျြခခြွငျးလို့မဆိုနိုငျပါဘူး။
ဒီနရောမှာတဈခုသတိပွုရမှာက ဆေးရော Copper IUDs ရောဟာ သန်ဓအေောငျပွီးသား ကိုယျဝနျရှိပွီးသားကိစ်စတှမှောတော့ ဆကျလကျမဖွဈပျေါအောငျတားဆီးနိုငျစှမျးမရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ဒါကွောငျ့ အကာအကှယျမဲ့လိငျဆကျဆံပွီး စောနိုငျသမြှစောစော Copper IUDs ကိုထညျ့ဖို့လိုပါတယျ။
ဘယျလိုလူတှေ သားအိမျတှငျးထညျ့ပစ်စညျး(Copper IUDs) ကိုသုံးနိုငျသလဲ?
-တားဆေးသုံးသျောလညျး ပကျြကှကျသူတှေ(ဥပမာ ဆေးသောကျဖို့မတေ့ာ လိငျဆကျဆံစဉျ ကှနျဒုံးပေါကျပွဲတာ အစရှိသဖွငျ့)တို့မှာသုံးနိုငျပါတယျ။
-ရာသီလာစဉျ သှေးဆငျးမြားခွငျး ကိုကျခဲခွငျးတို့ဖွဈတတျပါတယျ။
ဒါတှဟော သုံးလလောကျအတှငျးမှာ အသားကပြွီး ပြောကျကငျးသှားတတျပါတယျ။
Copper IUDs ထညျ့သှငျးခွငျးကို ကြှမျးကငျြသူကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြားသာ လုပျဆောငျသငျ့ပါတယျ။
အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးဆို လူအများစုသိကြတာက ဆေးလုံးလေးတွေပါ။ဒါပေမယ့် အရေးပေါ်သန္ဓေတားရာမှာ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သားအိမ်အတွင်းထည့်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ copper IUDs ပါပဲ။
Copper IUDs ဟာ အကာအကွယ်မရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံမှုပြုလုပ်ပြီး ၅ ရက်အတွင်းထည့်သွင်းအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်မရရှိအောင် ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ပါတယ်။
အရေးပေါ်သ္ဓေနတားဆေး(Emergency pills) နဲ့ ကွာခြားချက်ကတော့ အရေးပေါ်သ္ဓေနတားဆေး ဟာ နောက်ထပ်ကိုယ်ဝန်မရအောင်ဆက်လက်ကာကွယ်ဖို့ တခြားနည်းလမ်းတွေကိုဆက်သုံးဖို့လိုပြီး Copper IUDs ကတော့ သားအိမ်ထဲက ပြန်မထုတ်မချင်း ၅ နှစ်နီးပါးအထိ သန္ဓေတားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
Copper IUDs ဟာ သုက်ပိုးနဲ့ သားဥတွေ့ဆုံမယ့်လမ်းကြောင်းကို ဝင်ရောက်ဟန့်တားနှောင့်ယှက်ခြင်းဖြင့်သန္ဓေတားတာဖြစ်ပါတယ်။သုက်ပိုးနဲ့သားဥမတွေ့ဆုံရင် သန္ဓေအောင်တာလည်းဖြစ်မလာနိုင်တော့တဲ့အတွက် ဒါတွေအသုံးပြု ခြင်းကို ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းလို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။
ဒီနေရာမှာတစ်ခုသတိပြုရမှာက ဆေးရော Copper IUDs ရောဟာ သန္ဓေအောင်ပြီးသား ကိုယ်ဝန်ရှိပြီးသားကိစ္စတွေမှာတော့ ဆက်လက်မဖြစ်ပေါ်အောင်တားဆီးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့် အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီး စောနိုင်သမျှစောစော Copper IUDs ကိုထည့်ဖို့လိုပါတယ်။
ဘယ်လိုလူတွေ သားအိမ်တွင်းထည့်ပစ္စည်း(Copper IUDs) ကိုသုံးနိုင်သလဲ?
-တားဆေးသုံးသော်လည်း ပျက်ကွက်သူတွေ(ဥပမာ ဆေးသောက်ဖို့မေ့တာ လိင်ဆက်ဆံစဉ် ကွန်ဒုံးပေါက်ပြဲတာ အစရှိသဖြင့်)တို့မှာသုံးနိုင်ပါတယ်။
-ရာသီလာစဉ် သွေးဆင်းများခြင်း ကိုက်ခဲခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒါတွေဟာ သုံးလလောက်အတွင်းမှာ အသားကျပြီး ပျောက်ကင်းသွားတတ်ပါတယ်။
Copper IUDs ထည့်သွင်းခြင်းကို ကျွမ်းကျင်သူကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသာ လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။